Dr. Tint Swe's Writings: June 2015
Tint Swe Counterfeit politics နကိုယ်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်
Swam Tee ဒီမိုကရေစီအတု ရွေးကောက်ပွဲအတုဖြစ်မှာကြောက်သည်
- ရွေးကောက်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါမည်။
- ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့ဟာလည်း အခုကိုဖြစ်နေပြီ။
- အဲတာနှစ်ခုအတွက်တော့ ဘဇာမျှ ကြောင့်ကျစရာမလိုပါ။
- ဘယ်အရာမှ ရာနှုန်းပြည့်မဟုတ်နိုင်တာလည်း လက်ခံရပါမည်။
- တတိယနေရာလုပွဲ အားခဲကြပါကုန်။
Flying abortion pills ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေး မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နဲ့ပို့ပေး
၂၇-၆-၂ဝ၁၅ နေ့ကသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုလန်နိုင်ငံမှာ ဥပဒေအရသာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ရှိတယ်။ အိမ်နီးချင်း ဂျာမဏီနဲ့ နယ်သာလင်နိုင်ငံတွေမှာတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေးကို ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်။ ဂျာမဏီ Women on Waves အဖွဲ့က အမျိုးသမီးတွေက စာနာစိတ်ထားပြီး (ဖရင့်ဖတ်) ကနေ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေးတွေကို မောင်းသူမပါတဲ့ (ဒရုန်း) လေယာဉ်လေးတွေနဲ့ ပိုလန်နိုင်ငံကို ပို့ကြတယ်။ (ဆလူဘိစ်) ရဲမေတွေကအဲတာတွေကို သိမ်းယူလိုက်ကြတယ်။
အရင်ကလည်း ဒတ်ခ်ျက ကင့်ပိန်းလုပ်သူအမျိုးသမီးတွေကလည်း အဲလိုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပို့ပေးတယ် ဆိုတာထက် ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့တင်းကြပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ပြသတာဖြစ်ပါတယ်။
ပိုလန်မှာ ကွန်မြူနစ်ကာလတုံးက ကိုယ်ဝန်ကိုတရားဝင်ဖျက်လို့ရတယ်။ ၁၉၉၃ ရောက်တော့ ခရစ်ယန်ဘာသာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ ဥပဒေနဲ့တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ မုဒိန်းမှု၊ ဆွေးမျိုးချင်နီးကပ်သူချင်းကနေရတဲ့ကိုယ်ဝန်၊ အထဲကကလေးမှာ ဆိုးတဲ့မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်ရှိနေရင်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆက်ယူရင်မိခင်လောင်းမှာ အသက်အန္တရာယ်နီးတာမျိုးတွေအတွက်သာ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချခွင့် ပြုပါတယ်။
ဥရောပ ၂၆ နိုင်ငံဟာ Schengen ရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်အရ နယ်နိမိတ်တွေကို ဖျက်ထားသလို ကူးလူး ဆက်ဆံနိုင်ကြပါတယ်။ ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့သာရောင်းချတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေးကို ဘယ်နိုင်ငံကဆရာဝန်ရေးရေး ပို့ပေးလို့ရတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေးကို လှေလေးတွေနဲ့လည်း ပို့ပေးနေကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခွင့် ကန့်သတ်ထားကြတဲ့ စပိန်၊ အိုင်ယာလန်နဲ့ ပိုလန်နိုင်ငံတွေမှာ အဲလိုလုပ်တာကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ကက်သလစ်သတင်း Nasz Dziennik ကအဲလိုလုပ်တာကို drone of death သေမင်းတမန်လေယာဉ်ပျံတွေလို့ ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသမီးတွေကတော့ အဲလိုကန့်သတ်ထားခြင်းဟာ အန္တရယ်များတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်နည်းကို ရွေးအောင်လုပ်တာလို့ အကြောင်းပြပါတယ်။
ဂျာမဏီနာဇီလက်ထက်တုံးက သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပိုလန်နိုင်ငံမှာ ကိုယ်ဝန်တားဆေးနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်နည်းတွေသုံးပြီး ပိုလန်တွေကို မျိုးတုံးအောင်ကြံစီခဲ့သေးတယ်။
မနေ့ကပဲ ကော့သောင်ကလာတဲ့မေးခွန်းတခုမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေး အဲဒီမှာဝယ်မရကြောင်းရေးလာတယ်။ (အာစီယန်) အုပ်စုအတွင်းမှာ (ရှန်ဂန်) လို ဗီဇာမလိုသဘောတူညီချက်ရလာရင် ထိုင်းဖက်ကနေ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေ အလွယ်နဲ့ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာလိမ့်မယ်။ (ဒရုန်း) လေယာဉ်တော့မတတ်နိုင်လို့ လေတံခွန်နဲ့ ပို့ပေးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ မီးပုံပျံနဲ့လည်းရမယ်။
- ပြည်တွင်းမှာက ဇွန်လ (၃ဝ) ရက်။
- ပြည်ပထွက်သူတွေက ဇန္နဝါရီ (၁) ရက်၊ အမှတ်ရလွယ်လို့တဲ့။
- ရက်ရာဇာမဟုတ်လည်း ရာဇာရက်ချည်းပဲ။ မင်းဘေးနဲမှည့်ကြတာကိုး။
Jun 28th, 5:09am ဆရာရှင့် ခုဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ဆရာ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမလို့ပါ။့့ Facebook မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ စကားဝိုင်းဆိုပြီး Group လေးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိဖို့ကြိုးစားနေသူတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူတွေနဲ့ မိခင်တွေအတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတတွေဖလှယ်ကြပါတယ်။့့ သားလေးက G6PD ပါဆရာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကတည်းက ဆရာရေးထားတာကိုဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မွေးလာတော့လဲ ဒီလိုဖြစ်လာတော့ တခြားသူတွေထက် ပိုစိတ်ပူမိပါတယ်။ မိဘတွေ အဒေါ်တွေကတော့ ဒီရောဂါအကြောင်း မသိကြတော့့ ကို ပိုတယ်လို့တောင်ထင်ပါတယ်။ ထင်လဲထင်ချင်စရာပါ။့့ သားလေးကို မွေးတော့စိတ်ချရအောင် အပြင်ဆေးရုံမှာ မမွေးဘဲ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံမှာမွေးတာပါ။ ကြားထဲက လိုအပ်ချက်တွေတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ကလေးမှာ ဒီလို တွေ့ရတယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်ကအခန်းထဲဝင်လာပြီး ရော့နင်ဒါတွေသိသင့်တယ်ဆိုပြီး မိတ္တူစာရွက်တရွက်ရယ် လက်ကမ်းစာစောင်တခုရယ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိတ္တူစာရွက်မှာ G6PD အတွက်ရှောင်ရန်နဲနဲပါးပါးရေးထားတယ်။ လက်ကမ်းစာစောင်က အသားဝါအကြောင်းသိကောင်းစရာပါ။ မိတ္တူစာရွက်ကိုတွေ့တော့ ဆရာဝန်ကို မေးတော့မှ အေး နင့်ကလေး အဲ့ဒါဖြစ်နေတာ၊ အဲဒါကြောင့်လာပေးတာဆိုပြီး ပြန်သွားတယ်။့့ မှာ အဲ့ဒီနေ့က လက်မှိုင်ချပဲဆရာ။ လူနာစောင့်တွေကတော့ ဘေးကနေ ပိုနေတယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့။ အခု့ တို့ စကားဝိုင်းမှာလဲ့့ လို မိခင်တွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ စသိတဲ့မိခင်တွေက့့လိုပဲ ကြုံခဲ့ရလို့နဲ့တူတယ်၊ ရောဂါအကြောင်း ဂဃနဏမသိကြပါဘူး။ သူတို့မှာ စိုးရိမ်စိတ်အ့နဲ့မေးကြပါတယ်။့့ လဲတတ်နိုင်သလောက်ရှင်းပြပါတယ်။ မိခင်လောင်းတွေကလဲ စိတ်ပူကြပါတယ်။ မေးတာအရမ်းများလာတဲ့အခါ့့ မှာ ဆရာရေးထားတာလေးကို share ရတာခဏခဏပါပဲ။ အဲဒိအတွက်ရော ဗဟုသုတတွေပေးတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးပါဆရာ။ ဆရာ့ကိုအမြဲလေးစားလျက်ပါ။
1. Chances of passing G6PD on to kids http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/chances-of-passing-g6pd-on-to-kids_26.html
2. G6PD and Blood groups နဲ့ သွေးအုပ်စု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/g6pd-and-blood-groups.html
3. G6PD Deficiency Support Group http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/g6pd-deficiency-support-group.html
4. G6PD Low-risk Drugs မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်နဲ့ ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/g6pd-low-risk-drugs.html
5. G6PD မွေးရာပါရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/g6pd.html
ဆရာခင်ဗျား Fournier's gangrene ရောဂါက ဘယ်လိုကြောင့် လိင်အင်္ဂါနေရာမှာဖြစ်ရတာပါလဲခင်ဗျာ။
(ဖေါင်းနီးယား ဂင်ဂရင်း) ကို ရောဂါဗေဒလို ကျား-မ အပြင်ပိုင်း လိင်အင်္ဂါတွေမှာ အရွတ်လွှာသွေးမရလို့ တစ်ရှူးတွေ ပျက်စီးပြီး သေသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်။ ဆီးချိုလိုခုခံအားနည်းနေသူတွေမျာ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ ထိခိုက်မိရာကနေလည်း ဖြစ်တယ်။ ပိုးဝင်လာလို့ပိုဆိုးလာတယ်။ အပေါ်ယံမှာ ပိုးဝင်ရာကနေ ပန်းတံနဲ့ ကပ်ပယ်အိပ်ဆီပြန့်လာနိုင်တယ်။ ဝမ်းဗိုက် ရှေ့ပိုင်းဆီလည်းရောက်သလို အဲလိုဖြစ်စဉ်ပြောင်းပြန်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျားအစေ့ထိရောက်တာက ရှားတယ်။ ပိုးပြင်းတာနဲ့ ခုခံအားနည်းတာတွေကနေ ဆိုးတာ သိပ်မဆိုးတာကိုဖြစ်စေတယ်။
၇၅-၉၅% မှာ အကြောင်းရှာလို့သိတယ်။ စအိုနဲ့အစာဟောင်းအိမ်လမ်း၊ ဆီး-လိင်လမ်းနဲ့ အရေပြားလမ်းတွေကနေ ဝင်တယ်။
ယောက်ျားတွေမှာ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါကိုကွင်းတပ်ခြင်း၊ လိင်တံထဲကိုကိန်းဆေးထိုးခြင်း၊ ဆီးပိုက်ထည့်ခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါအတုတပ်ခြင်း၊ ဆေးထိုးခြင်း၊ စတီရွိုက်ဆေး စအိုကနေသွင်းခြင်း၊ စအိုထဲ အခြားပစ္စည်း ဝင်ခြင်းတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
မိန်းမတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ရာပိုးဝင်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်၊ ဘာသိုလင်ဂလင်းပြည်တည်ခြင်း၊ သားအိမ်ထုတ်ခြင်း၊ မွေးလမ်း ချဲ့ခြင်းတွေကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ကလေးတွေမှာ ပန်းအဖျားဖြတ်ခြင်း၊ ဟာနီယာဖြစ်ရာကနေအူပိတ်ခြင်း၊ ချက်ရောင်ခြင်း၊ အင်းဆက်ကိုက်ခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်း၊ ဆီးလမ်းကိရိယာထည့်ခြင်း၊ တင်ပါးနေရာပြည်တည်နာ၊ အထွေထွေရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတွေကနေဖြစ်စေတယ်။
Streptococcal species ဆထွက်ပ်ပိုး၊ Staphylococcal species စတက်ဖ်ပိုး၊ Enterobacteriaceae အင်တရိုပိုး၊ Anaerobic organisms လေမကြိုက်ပိုးနဲ့ Fungi မှိုပိုးတွေဝင်နိုင်တယ်။ Escherichia coli, Bacteroides, Proteus, Enterococcus, Pseudomonas, Klebsiella နဲ့ Clostridium ပိုးတွေကနေဖြစ်စေတယ်။
• ဆီးချို (၆ဝ%)၊
• အသက်ကြီးလွန်း ငယ်လွန်းခြင်း၊
• သွေားကြောရောဂါ တင်ပါးပိုင်းမှာရှိခြင်း၊
• ကင်ဆာ (လူကီးမီးယား)
• ပိုးအများကြီးကိုနိုင်မယ့်ဆေးရွေးပေးရတယ်။ Ciprofloxacin နဲ့ Clindamycin တွေသုံးတယ်။
• တခြားသုံးနိုင်တဲ့ဆေးတွေကတော့ ampicillin/sulbactam, ticarcillin/clavulanate, or piperacillin/tazobactam + aminoglycoside and metronidazole or clindamycin တွေဖြစ်ကြတယ်။
• Vancomycin ကို (MRSA) အတွက်သုံးတယ်။
• intravenous immunoglobulin (IVIG) ကိုလည်းပေးရတတ်တယ်။
• fungi မှိုအတွက်ဆိုရင် amphotericin B or caspofungin တွေပေးမယ်။
Surgical Diagnosis and Debridement ခွဲစိတ်နည်းနဲ့ ပျက်စီးသေနေတာတွေကို ရှင်းထုတ်ပေးရတယ်။ Reconstruction အစားထိုးလုပ်ပေးရာတတွေရှိနိုင်တယ်။ Hyperbaric Oxygen Therapy အောက်စီဂျင်ကုသနည်းလည်းလိုတတ်တယ်။
အဖြစ်မများပါ။ ၁၉၉၆ တုံးက တကမ္ဘာလုံးမှာ စုစုပေါင်း လူနာ ၆ဝဝ ရှိခဲ့တယ်။ ယောက်ျား ၁ဝ ယောက်မှာ မိန်းမ ၁ ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဂေးတွေမှာပိုဖြစ်တယ်။ ဆေးယဉ်ပိုးတွေရှိနေတယ်။ အသက် ၃ဝ-၆ဝ မှာများတယ်။ ၇၅% အထိ သေဆုံးနိုင်တယ်။ ဆီးချိုနဲ့ HIV ရှိသူတွေက သေဆုံးမှုများတဲ့စာရင်းထဲမှာ မပါတာ အံ့သြစရာကောင်းတယ်။
ဆရာရှင့် ကျွန်မသားလေး ဒီနေ့ပဲ အသက်တနစ်နဲ့နှစ်လပြည့်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကစပြီး သားလေး ဆီးနည်းနည်းကို အကြိမ်များများသွားပြီး ဆီးသွားဝမ်းသွားတိုင်း ကျင်သလိုတုန်ခါသွားတတ်ပါတယ်။ ကောင်းသွားမှာပါ ဆိုပြီး စောင့်ကြည့်တာ အခုထိမသက်သာသေးတာမို့ ကလေးအထူးကုဆီသွားလိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်မကြီးက ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာလို့ပြောပြီး သောက်ဆေးတမျိုးပေးလာပါတယ်။5ml တရက် နစ်ကြိမ် တပါတ်တိုက်တဲ့။ ကျွန်မသိချင်တာက ဒီအရွယ်ကလေးငယ်တွေ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တတ်ပါသလား။ ဘာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ ဘယ်လိုသတိထားရှောင်ရပါမလဲ။ diaper သုံးခြင်းနဲ့လဲသက်ဆိုင်ပါသလား။ ကျွန်မသားလေးကို ညတိုင်းသုံးပေးပါတယ်။ ပေါင်ဒါ ပေါင်ကြား ဖြူးပေးတာကလဲဖြစ်တတ်ပါသလား။ ဆရာအချိန်ရရင် ဗဟုသုတအနေနဲ့ မှတ်သားထားချင်လို့ ပြန်ဖြေပေးပါနော်။ ကလေးအထူးကုသမားတော်ကို ဘာလို့ဒီမေးခွန်းတွေ မမေးလဲလို့ ဆရာ တွေးနေမိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆရာမကြီးက ကလေးတယောက်ကို ငါးမိနစ်ပဲအချိန်ပေးပါတယ်ရှင်။ ဆရာ့ကို အမြဲရိုသေလေးစားလျက်ပါ။
ဒိုင်ယာပါကို အကြိမ်ရေများလဲပေးသင့်တယ်။ အရွယ်အရ ကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်တတ်အောင်သင့်ပေးပါ။ မိန်းကလေးတွေ ဆီးသွားပြီးတိုင်းရေဆေးစေပါ။ အဲလိုနေရာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင် လူကြီးရော ကလေးပါ လက်ကို ရှေ့ကနေ နောက်ဖက်ဆီကိုသာ တလမ်းသွးလုပ်ပါစေ။ ဆပ်ပြာစတာတွေကို အရိုးရှင်းဆုံးသာသုံးပါ။ စိုနေတာကို အဝတ်မဝတ်မီ ခြောက်သွေ့စေပါ။ အတွင်းခံကို သဘာဝထွက်ခြည်အမျိုးမစားသာသုံးပါ။ ဆီးကိုကုန်အောင်သွားစေပါ။
MOM လည်းခေါ်တယ်။ Cream of Magnesia လို့လည်းခေါ်တယ်။ Magnesium hydroxide (မက်ဂနီဆီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက်) ဝမ်းပျော့ဆေးဖြစ်တယ်။ အသုံးများတယ်။ တလွဲသုံးနေသူတွေကို သတိပေးချင်လို့ သည်စာကိုရေးပါတယ်။ တခြားအသုံးတွေကိုလည်းသိစေချင်လို့။
(အော့စ်မောတစ်) အမျိုးအစားဝမ်းနုပ်ဆေးဖြစ်တယ်။ (အော့စ်မောတစ်) ဖိအားသဘောအရ ကိုယ်ထဲကရေကို အူမကြီးထဲကို စုပ်ယူပေးတယ်။ ဆေးရည်ရှိတယ်။ ဆေးပြားရှိတယ်။ ဆေးသောက်ပြီး နာရီဝက်ကနေ ၆ နာရီမှာ ဝမ်းသွားစေမယ်။
သတိပေးချက် = ရေတိုအတွက်သာသုံးပါ။ ကြာကြာသုံးရင် အူမကြီးအလုပ်ကိုထိခိုက်မယ်။ ဝမ်းချုပ်တာဖြစ်လာစေမယ်။ ကျောက်ကပ်မကောင်းသူ မသင့်ပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ = ဗိုက်နာ၊ ဗိုက်အနေရခက်၊ အန်၊ ဝမ်းလျော၊ Dasatinib (Sprycel), Delavirdine (Rescriptor), Digoxin (Digox, Lanoxin), Phosphate supplements နဲ့ Some antibiotics တချို့ပိုးသေဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တယ်။
လူကြီး (၁၂ နှစ်အထက်) = ဟင်းစားဇွန်း ၁-၂ ဇွန်းညအိပ်ယာဝင်၊ ရေတဖန်ခွက်နဲ့သောက်ပါ။
၆-၁၁ နှစ် လူကြီးထက် တဝက်သောက်ပါ။ ၆ နှစ်အောက် ဆရာဝန်ပြောပြီးမှသောက်ပါ။
Antacid အက်စစ်ပျယ်ဆေးအနေနဲ့လည်းသုံးတယ်။ ဝက်ခြံမှာလည်း ပိုးသေဆေးသောက်ပြီး ဒီဆေးရည်လိမ်းရတယ်။ အဆီပျံအရေပြားအတွက်လည်း လိမ်းဆေးအဖြစ်သုံးတယ်။
Deodorant အနံ့ပျောက်ဆေးအနေနဲ့လည်းသုံးကြတယ်။ ချိုင်းမှာနည်းနည်းလိမ်းပေးရတယ်။ ခြောက်သွားမှ အဝတ်အစား ဝတ်ပါ။ နောက်တနည်းက Roll-on deodorant အခွံထဲကို ဒီဆေးရည်ထည့်သုံးရတယ်။
Surgery for chronic low back pain နာတာရှည်ခါးနာခြင်းနဲ့ ခွဲစိတ်ခြင်း
Wai Tun ခွဲစိပ်မူက အောင်မြင်မူလွယ်လားဒေါက်တာ။ ခွဲစိပ်မူကြောင့် တစုံတရာ ပိုပြီးထိခိုက်နိုင်ပါသလား။
Lumbar spondylosis ကို Spinal arthritis နဲ့ Spinal osteoarthritis လို့လည်းခေါ်တယ်။ အမှန်က ဇရာဖြစ်စဉ်ပါ။ ဇရာဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်း အန်တုရတာ အင်မတန်ခက်ခဲတယ်။ အသက်ရလို့ဖြစ်တာနဲ့ အသုံးများလို့ဖြစ်တာ ဆိုပြီး ၂ မျိုးကနေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အသက်သိပ်မကြီးသေးသူတွေမှာလာဖြစ်တယ်။ အရွတ်၊ အဆစ်နဲ့ ခါးရိုးတွေကြား အရွတ်တွေမှာ ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်။ နောက်ဆက်တွဲတွေထဲကတခုက အာရုံကြောပေါ်ကို သက်ရောက်တာ ဖြစ်တယ်။ Cervical spine လည်ပင်းပိုင်း၊ Thoracic spine ရင်ခေါင်းပိုင်းနဲ့ Lumbar spine ခါးပိုင်း (၃) နေရာလုံးမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
နာတာရှည်ခါးနာသူတွေကို ခွဲစိတ်ကုသပေးရတာက ငြင်းခုန်းစရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသလား၊ နာတာတွေသက်သာသလား၊ ဒုက္ခိတဖြစ်နေတာ ကောင်းလာသလား လေ့လာမှုတွေလုပ်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Physical therapy ဖီဇီယိုကုသနည်းနဲ့ Pain management နာတာကုသနည်းကိုသာအားကိုးစေရတာများတယ်။ ခွဲဘို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ ပြောတာတော့မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်တာနည်းပါတယ်။ ဖြစ်နေတာ ရက်မကြာသေးသူတွေ၊ အာရုံကြောထိခိုက်မှု မဆိုးသူတွေက ခွဲစိတ်ဘို့မသင့်ပါ။
Acute sciatica ခေါ်တဲ့ ပေါင်နောက်ဖက်က အာရုံကြောကြီးကနေနာတာမျိုးကြောင့် အာရုံကြောအားနည်းလာရင်၊ တခြားကုသနည်းနဲ့သက်သာမှုမရရင်၊ Cauda equina syndrome ခေါ်တဲ့ ခါးရိုးမကြီးထဲက အာရုံကြောအခြေကို ကျွံထွက်လာတဲ့ ခါးရိုးဆစ်အရိုးနုကနေ ဖိခံထားရရင်၊ Mass အလုံးအကျိတ်ကနေအာရုံကြောကိုဖိနေရင်လည်း ခွဲရမယ်။ Bowel or bladder dysfunction ဆီးအိမ်နဲ့ အစာဟောင်းအိမ်ဆီသွားတဲ့ အာရုံကြောတွေ ထိခိုက်နေရင် ခွဲသင့်တယ်။ Neurologic dysfunctions အာရုံကြော ထိခိုက်မှုကြောင့် ခြေထောက်ပိုင်းအားနည်းနေတာ၊ ထုံ-ကျင်နေတာတွေ ဖြစ်လာရင်လည်း ခွဲစိတ်နည်းစဉ်းစားနိုင်တယ်။
ခွဲစိတ်နည်းကို Spinal decompression surgery ခေါ်တယ်။ နည်းနာတွေအမျိုးမျိုးလည်းရှိသေးတယ်။ Spinal stenosis, အာရုံကြောသွားလမ်းကျဉ်းနေတာ၊ Herniated intervertebral discs ခါးစစ်ရိုးကျွံတာ၊ Foraminal stenosis အရိုးစွန်းကြောင့် (ဖေးဆက်) အဆစ်တွေကျဉ်းတာကိုလည်း ဒီခွဲစိတ်ကုသနည်းလုပ်ရတယ်။
၁။ Laminectomy စပိုင်နယ်လှိုင်ပေါ်ကိုခုံးခုံးလေးဖုံးထားတဲ့အရိုးလွာကိုဖြတ်နည်းကနေ ကျဉ်းနေတာကိုသက်သာစေမယ်။ အာရုံကြောကိုဖိတာ သက်သာစေမယ်။
၂။ Discectomy ခါးရိုးဆစ်အစိတ်အပိုင်းတခုကို ဖယ်ထုတ်ပေးတယ်။ သူကနေ အာရုံကြောကို ဖိနေတာသက်သာစေမယ်။
၃။ Foraminotomy (foraminectomy) နည်းဆိုတာ အာရုံကြောအခြေနေရာ အပေါက်ကိုချဲ့ပေးမယ်။
၄။ Osteophyte removal ဆိုတာ အပိုဖြစ်လာတဲ့အရိုးစွန်းလေးတွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးတယ်။ အဲတာတွေကနေ အာရုံကြောကိုဖိနေတာ သက်သာစေမယ်။
၅။ Corpectomy ဆိုတာ ခါးရိုးတစ် အရိုးဖြစ်ဖြစ် အရိုးနုဖြစ်ဖြစ် ခွဲထုတ်တယ်။
၆။ Fusion of the vertebrae ခါးရိုးတွေတခုနဲ့တခု ပေါင်းသွားတာအတွက် အဲဒီခွဲနည်း တခုမကတွဲလုပ်ရတယ်။
Risks Associated with Spondylosis Surgery ခွဲစိတ်လို့ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တာတွေ
၁။ Injury to the spinal cord or nerves ခါးရိုးမကြီးထဲက အာရုံကြောကြီးကိုထိခိုက်မတာ။
၂။ Non-healing of the bony fusion (Pseudoarthrosis) အရိုးချင်းဆက်မလာတာ။
၃။ Failure to improve ပိုကောင်းမလာတာ။
၄။ Infection and/or bone graft site pain ရောဂါပိုးဝင်တာ။
၅။ Pain and swelling in the leg veins (Phlebitis) အောက်ပိုင်း သွေးပြန်ကြောတွေရောင်တာ။
၆။ Urinary problems ဆီးအသွားရခက်တာ။
အင်ဒီယာနာပိုးလစ်မှာ မိုးရွာနေလို့ သမီးက မိုးရွာလိုက်တော့ ပိုစိမ်းလာတဲ့ သစ်ရွက်လေးတွေကို ပန်းလေးတွေနဲ့ တွဲပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။
ဒေလီမှာလည်း မိုးရွာနေသတဲ့။ ကျွန်တော့်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သူနေ တင်တယ်။ ခုချိန်ဆို တို့လယ်တောမှာ မိုးရေတွေလည်း ဖွေးနေတော့မလေ လွမ်းထှာတဲ့။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာလည်း တောရွာတရွာမှာ မိုးရွာခဲ့တာကို အမှတ်ရနေတယ်။ အိမ်ပေါ်ရောက်လာကတည်းက ဘာအလုပ်မှ မယ်မယ်ရရမလုပ်တဲ့ သားမက်ကနေ တညမှာ အဘရာ ကျုပ်ကို မိုးရွာရင်နိုးဗျာ။ မိုးလည်းကျလာတော့ နိုးလိုက်တယ်။ ဖါးထွက်ရိုက်မလို့လား အားကိုးထားတယ်။ ဘယ်ဟုတ်မလည်း မိုးတစိမ်စိမ့်နဲ့ ဆံစက်မြိတ်မှာ ဆေးလိပ် ထိုင်သောက်ရတာ ဇိမ်ကျသတဲ့။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒေါသမိုးတွေရွာနေတယ်။ ဖါးသာထွက်ရိုက်ကြပေတော့ဗျာ။
အရင်ကဆိုရင် မွတ်ဆလင်တိုင်းပြည်တွေမှာ ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံတွေကြောင့် HIV/AIDS ရောဂါကာကွယ်မှု ရစေတယ်လို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဥပမာ ယောက်ျားလေးမှန်သမျှ ပန်းအဖျားလှီးဖြတ်စေတာမျိုးဟာ HIV/AIDS ကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ သုတေသနတချို့က ထောက်ခံလာတယ်။ WHO တောင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်က သဘောမတူချင်ပါ။ သုတေသနလုပ်တာတွေ နည်းသေးတယ်။ ရလဒ်တွေဖတ်တာ အချိန် သိပ်စောသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးမှာ နိုင်ငံရေးတွေသိပ်များနေသလား သံသယရှိတယ်။ HIV/AIDS ရောဂါကို ထိရောက်တဲ့ တခြားနည်းသုံးပြီး ကာကွယ်စေဘို့မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်သွားစေနိုင်တယ်။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ အိမ်ထောင်မပြုခင်လိင်ဆက်ဆံတာ၊ အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြားတာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာရောင်းစားတာ၊ လိင်တူဆက်ဆံတာနဲ့ မူးယစ်ဆေးထိုးတာတွေ နည်းပါးတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ဘာသာရေးအခြေခံ ခေါင်းဆောင်တွေက HIV/AIDS (ဆီမီနာ) လုပ်တာကို သပိတ်မှောက်ကြတယ်။ ၁၉၉၅ မှာ အင်ဒိုနီးရှား Ulemas ဘာသာရေးကောင်စီက (ကွန်ဒွမ်) ကို လက်ထပ်လင်မယားတွေကိုသာ ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့ ရောင်းရမယ်လို့ လုပ်ခဲ့တယ်။ အိမ်ထောင်မဟုတ်ဘဲ လိင်ဆက်ဆံတာကို ဘာသာရေးတင်းကြပ်မှုနဲ့ တားနိုင်တယ်လို့ ယူဆတာမို့ လုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ မွတ်ဆလင်ဦးရေ ၁့၃ ဘီလျန်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ HIV/AIDS ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ရင် ဆွေးနွေးကြတာလဲ နည်းတယ်။ စာရင်းဇယားရတာလဲ မလုံလောက်ဘူး။ ရတာတွေကလဲ မယုံလောက်ဘူး။ UNAIDS ကနေ ခန့်မှန်းတာက မြောက်ပိုင်း အာဖရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့ မွတ်ဆလင်များရာ အာရှဒေသတွေမှာ HIV ရှိသူ လူ ၁ သန်းရှိနိုင်တယ်။ ဒါတောင် အာဖကန်နစ္စတန်၊ တူရကီနဲ့ ဆိုမာလီမှာ စာရင်းဇယားမရှိကြဘူး။ စမ်းသပ်မှုနှုန်းလည်း နည်းလွန်းတယ်။
နောက်ဆုံးရ UNAIDS သတင်းတွေမှာ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေကနေ စာရင်းမရတာ ဆက်တွေ့နေရသေးတယ်။ ဘယ်သာသာယူတဲ့ ဘယ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ဖြစ် HIV/AIDS တိုက်ဖျက်ရေးဆိုတာ အမျိုးသမီးအများစုနဲ့ သိပ်ဆိုင်နေတယ်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး နိမ့်ကျနေရင် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ မိန်းမက ယောက်ျားကို ဘာမှအတွန့် မတက်ရတဲ့ ဘာသာရေး-လူမှုရေး အလေ့အထတွေကလဲ အဟန့်အတား ဖြစ်စေတယ်။
မွတ်ဆလင်ဦးရေထူထပ်တဲ့ ဆာဟာရအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ဘာသာရေးကနေ ရောဂါကို တားမရတာ၊ HIV/AIDS အန္ကရာယ်ရှိနေတာ တွေ့နေရပြီ။ နိုက်ဂျီးရီယား မှာ ၆-၁ဝ%၊ အီသီယိုပီးယားမှာ ၁ဝ-၁၈% HIV-positive ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါက ကပ်ရောဂါလို ဖြစ်လာနေတာတောင်မှ ပေါ်လစီချသူတွေက လိင်မဆက်ဆံဘဲ နေကြဘို့၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမသုံးကြဘို့နဲ့ တရားမဝင်လိင်မဆက်ဆံဘို့ကိုသာ အာရုံစိုက်နေကြသေးတယ်။ ၂ဝဝ၅ လောက်က မွတ်ဆလင် တချို့နေရာတွေမှာ ၆ဝ% HIV ပိုးရှိနေတယ်။ ပိုးတွေ့ပြီး တနှစ်နေရင် သေဆုံးသွားတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ နေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ မော်ရိုကိုတွေမှာလည်း ပြဿနာမသေးဘူး။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ အီရန်လိုနိုင်ငံမှာတောင် တိုးတက်တာတွေ ရှိလာပြီ။ ပညာပေးတာတွေ ရှိလာတယ်။ ဟောပြောတာတွေ လုပ်နိုင်လာတယ်။ အရင်က အီရန်မှာ ပိုးတွေ့ရင် အလုပ်ကထုတ်ပြစ်ခဲ့တယ်။ ဆေးရုံတွေမှာ ဆရာဝန်တွေက ဆေးကုမပေးဘို့ ငြင်းဆိုခွင့် ရှိခဲ့တယ်။ အခု တိုက်ဖျက်ရေးကို တရားဝင်လုပ်လာတယ်။ မလုပ်လို့လဲ မရတော့ဘူး။ လိင်နဲ့ အသက်မွေး မိန်းမပေါင်း ၃ သောင်း ကနေ ၃ သိန်းရှိမယ်။ ဘယ်လောက်များများ ပိုးရှိနေတယ်ဆိုတာ အစိုးရလဲ မသိဘူး။
၁၂-၇-၂ဝ၁ဝ သတင်းတပုဒ်အရ ကင်ညာနိုင်ငံမှာ မယားအများယူလို့ HIV ဖြစ်တာ ပိုများတယ်လို့ ပါရှိခဲ့တယ်။ သူတို့ဆီမှာ အိမ်ထောင်ကျ မိန်းမ ၁ဝဝ မှာ ၁၃ ယောက်ဟာ မိန်းမတယောက်မက ယူထားတဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ ရနေသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါတောင် ၂ဝဝ၃ တုံးက ၁၆ ယောက်ရှိရာကနေ လျှော့လာတာပါ။ ဒီ မယားအများယူတဲ့ အလေ့အကျင့် ကနေ HIS/AIDS ဖြစ်တာပိုများစေတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ယူဆကြတယ်။
(ဆွာဇီလန်) မှာလည်း Polygamy မိန်းမများတာ နဲ့ Promiscuity လိင်ဆက်ဆံအဖေါ် အများကြီး ရှိသူတွေကြောင့် HIV/AIDS ဖြစ်ရတယ်လို့ ယူဆနိုင်တယ်။ (ဆွာဇီလန်) သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်ကြီး King Mswati III မှာ မိဖုရား ၁၃ ပါးရှိတယ်။ သူ့တိုင်းပြည်မှာ HIV ၄ဝ% နီးနီး ကူးစက်နေတယ်။
ဒီမိုကရေစီမရှိ-မကျတဲ့ အစိုးရတွေက HIV/AIDS ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ကုသရေး လုပ်တာတွေမှာ အဟန့်အတား လုပ်တတ်ကြတယ် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက (ကွန်ဒွမ်) ကို လက်ခံတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ ၂ဝ၁ဝ မေလထဲ ရောက်မှ တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။
လက်ထပ်မယားများတာ၊ မုဆိုးမကိုယူလိုက်တာ၊ ဆက်ဆံဘက် မိန်းမများတာ၊ လက်မထပ်ဘဲ ဆက်ဆံတာတွေဟာ အသိုင်းအဝိုင်းကို အထောက်အကူ ရစေမယ်လို့ ထင်မှတ် လက်ခံခဲ့ကြတယ်။ အခု အဲဒါမျိုးတွေက HIV/AIDS ပြန့်စေဘို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလာရတယ်။ UNDP အစီရင်ခံစာအရ လိင်ဆက်ဆံဘက်များတာ၊ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အပျိုရည်ပျက်တာ၊ အရွယ် သိပ်ကွာသူချင်း လိင်ဆက်ဆံတာ၊ (ကွန်ဒွမ်) ကို စနစ်တကျမသုံးတာတွေကြောင့် HIV/AIDS ပိုဖြစ်စေတယ်။ လိင်ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ လိင်အကြမ်းဖက်တာ၊ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါအဖြစ်များတာ၊ ပန်းငုံတာကို မဖြတ်ပဲ နေတာတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကြောင့်လည်း ရောဂါကူးစေဘို့ အားပေးရာကျတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်သင့်လည်းဆိုတာအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ တောင်အာဖရိကကို ယှဉ်ကြည့်ရင် သိသာတာတွေ့ရမယ်။ ၁၉၉ဝ ကျော်လောက်က နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ HIV ၂-၃% ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ထိုင်းမှာ ကာကွယ်ရေးကို အပြင်းအထံကြိုးစားလုပ်တယ်။ ဖြစ်နှုန်း တိုးမလာတော့ဘူး။ တောင်အာဖရိကမှာတော့ အဲလိုမလုပ်လို့ ၂၅% ပိုးတွေ့နေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မွတ်ဆလင် နိုင်ငံတွေကို HIV နှိမ်နင်းချင်ရင် ဒီဥပမာ ၂ ခုကို ယူနိုင်တယ်။
မယားများရင် ရောဂါလဲများမယ်။ ရောဂါတိုင်းကို ဘုရားကု ကုဘို့မကြိုးစားသင့်ပါ။
- မနေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ မဲခွဲကြတယ်။ အရပ်သားလွှတ်တော်အမတ် ၁ဝ% ကနေ ၃၃% အထိကနေ ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့တယ်။
- အရပ်သားဆိုတိုင်းကို ကိုယ့်ဖက်ကလို့ (အရပ်သားဖက်ကလို့) ထင်မနေကြနဲ့။
- အဲလိုအမတ်တွေကို မဲပေးခဲ့ကြတဲ့အရပ်သားတွေရှိလို့သာ သူတို့က လွှတ်တော်တက်နေကြတာ။ အရပ်ထဲလာရင်လည်း အဲလိုအမတ်တွေကို ယပ်ခပ်တောင်ပေးကြသေးတယ်။
- ပြောတုံးဟောတုံးက ဒီမိုကရေစီ။ ပါတီနာမည်ကလည်း ဒီမိုကရေစီပဲ။ ဝတ်တာစားတာကလည်း တိုက်ပုံအင်္ကျီ၊ စုံချပုဝါနဲ့။
- လာလိမ့်အုံးမယ် နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဲသည်အတိုင်း။
- နာမည်နဲ့ အဝတ်အစားချည်း မကြည့်ကြနဲ့။ စစ်သားချည်းအပြစ်မြင်မနေကြနဲ့။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေထဲလည်း အဲလိုပဲ။
- လှိုက်စားတဲ့အနာဆိုတာ ဆေးပညာမှာ သိပ်အကုရခက်တယ်။ ခွဲစိတ်လှီးထုတ်၊ အနာသစ်လုပ်ပြီး အောက်အခြေကနေ အသားနုတက်စေမှသာ ရတယ်။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ မူကြမ်းထဲက ပုဒ်မခွဲ ၆ ခုကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ လျှို့ဝှက် မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ပုဒ်မ ၅၉(စ) နဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆၊ နှစ်ခုစလုံးကို မပြင်ဆင်ဖို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ညောင်ဦးတွင် မတ်လ (၁၇) ရက် နံနက် (၁) နာရီအချိန်ခန့်က ထီးလိုမင်းလိုဘုရားရှိ အလှူခံပုံးများအား ဖွင့်ဖောက် အခိုးခံခဲ့ရ။
၂ဝဝ၇ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတုံးက ကော်မရှင်ကနေ ဘိုးဘိုးအောင်လုပ်လိုက်လို့ မဲရုံတခုမှာ ၁ဝ၂% တောင်မှ ထောက်ခံပါသတဲ့။ ၁၅-၁၁-၂ဝ၁ဝ နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာထဲမှာ တောင်ငူမဲဆန္ဒနယ်မြေမယ် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူပေါင်း ၇၄၆၄၆ ယောက်၊ ထောက်ခံမဲပေးသူပေါင်း ၇၁,၂၂၇ + ကြိုတင်မဲ ၄,၉၇၇ = ၇၆၂,ဝ၁၄၊ ရာနှုန်းအားဖြင့် ၁ဝ၂% ကနေ ထောက်ခံတယ်လို့ ပါခဲ့တယ်။
Sein Win ကျုပ်က NLD ကလွဲလို့ ဘယ်ပါတီကိုမှ မထောက်ခံခဲ့ဖူးဘူး။
- ဆရာလည်း အဲလိုပဲ။ ခက်တာက ကျွန်တော်တတွေ မနေ့ကမဲမပေးရဘူးဗျ။
- မဲမိုးကရေစီခေတ်ကိုး။ ဓါးမိုးကတော့ ကလာကာနောက်မှာ ရောက်သွားပြီ။
- သံလျက်ကိုတော့ ဖင်ခုထားသေးသဗျ။
- သံလျက်ကိုင်နဲ့ ဆင်ချေးကျုံး မြင်းချေးကျုံးတွေ လယ်ဗယ်တူကစားနိုင်ကြမှာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲပဲ။
- ကစားကွင်းကတော့ ပုံထဲကအတိုင်းပဲဗျ။
Koko Laykoko ဆရာ ပဒကုသလ အနည်းအကျဉ်းပြောပြပါလား။ ကျနော်အပါဝင် မသိသူများ မျက်စိပိုကျယ်သွားတာပေါ့။
ပဒကုသလဇာတ်ဆိုတာ ဘုရားအလောင်း ပဒကုသလလုလင်အကြောင်းဖြစ်တယ်။ သူ့မိခင် ဘီလူးမကပေးခဲ့လို့ စိန္တာမဏိဂါထာကို ရထားတယ်။ စိန္တာမဏိဂါထာအစွမ်းကြောင့် ပဒကုသလဟာ ခြေရာကောက်အတတ်ပညာကို တတ်တယ်။ ဘုရင်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘဏ္ဍာကိုပါ ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
ဘုရင်ဟာ သူ့ကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုလာမှာကို စိုးရိမ်လာတယ်။ သန်လျက်ကို ကိုယ်တိုင်ဖွက်ထားပြီး၊ ပဒကုသလကို သန်လျက်အရှာခိုင်းတယ်။ ဇာတ်မင်းသားတွေကနေ ဒီဇာတ်ကိုခင်းတဲ့အခါ ငိုချင်းချကြတယ်။
အကြံရခက်လေသနော့့် သံလျက်တော်ယူသည့် သူခိုးရယ်က၊ သူ့အမျိုးဟာ ဧကရီမို့ အမျိုးအမည်ကို ထုတ်ဖော်ကာ မပြောပါရစေနဲ့ ဓား ကုပ်ပေါ်မှာဝဲ့့။
အကြံရခက်လေသနော့့် သန်လျက်တော်ယူသည့် သူခိုးကိုလ၊ သူ့အမျိုးထုတ်ဖော်ပြောရလျှင်၊ ဓားကုတ်ပေါ်မှာဝဲ၊
သူခိုးကလိမ္မာ့့ မျက်နှာကြီးဟာမို့၊ စနက်မီးပမာ၊ ထိရာက ရှပါလိမ့်မယ့့်။
သန်လျက်ကို ဘုရင်ကိုယ်တိုင် ဖွက်ထားတာကို ပဒကုသလကသိတယ်။ ဘုရင်ကိုယ်တိုင် အကောက်ကြံတာကိုလည်း သိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်း စိန္တာမဏိဂါထာရကြလို့ ဘယ်သူအကောက်ကြံထားသလည်း သိနေကြတယ်။
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် = ဘဘ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီသွားပြီးတော့ ဘဘဆီက မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ နူတ်ထွက်စကား တောင်းသင့်တယ်။
ချင်းအမတ်မင်း အကြံကုန်၍ ပဒကုသလဇာတ်ခင်းသည်။
အကြံရခက်လေသနော့့် သံလျက်တော်ယူသည့် သူခိုးရယ်က သူ့အမျိုးဟာ ဧကရီမို့ သူ့အမည်ကို ထုတ်ဖော် မပြောပါရစေနဲ့ ဓားကုပ်ပေါ်မှာဝဲ့့
အခုလေးတင် ပြည်တွင်းနေ အမျိုးသမီတဦးက သူမေးချင်တာမေးတယ်။ ဖြေလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ ဆရာဝန်မပါလို့ ထပ်မိတ်ဆက်ပြီ့း့
12:05 am တစ်မျိုးတော့ မထင်ပါနဲ့ဆရာ။ ဆရာ့အတွက် consultation fee ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဆရာဆန္ဒရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုခုမှာ လှူဒါန်းပေးပါမယ်ဆရာ။ ဆရာလည်းကုသိုလ်ရ သမီးလည်းကုသိုလ်ရ၊ လိုအပ်နေတဲ့နေရာလည်း အထောက်အပံ့ရတာပေါဆရာ။ ဆရာလှူချင်တဲ့နေရာကို ပြောပါဆရာ။ ဒေါ်လာ ၂ဝ၊ ၃ဝ ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရလားဆရာ။ သမီးတတ်နိုင် သလောက်လေးပါ။
ဟုတ်။ ဆရာ သည်လိုပဲလုပ်နေရတာ အကျင့်ရနေပါပြီ။ အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။
ဟုတ် ဆရာ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
S.T.EYE condoms that change color when they come in contact with STIs
ဗြိတိန်က ဆယ်ကျော်သက် ၃ ယောက်နေ တီထွင်မှုတခုလုပ်ပါတယ်။ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါရှိနေရင် ကွန်ဒွမ် အရောင်ပြောင်းသွာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ S.T.EYE condom လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ အဲလိုအရောင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေဆိုတာ ကလာမိုင်ဒီးယားနဲ့ ဆစ်ဖလစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ လိင်လမ်းရေယုံနဲ့ လိင်လမ်း ကြွက်နို့တွေကိုလည်းသိမယ်။
မော့ဇ် နောဝပ်ဇ်က ၁၃ နှစ်၊ ဒယ်နီရယ် အလီက ၁၄ နှစ်နဲ့ ချီရက်ရှာက ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိကြတယ်။ လန်ဒန်အရှေ့ပိုင်းက Isaac Newton Academy ကျောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကွန်ဒွမ်ကိုသုံးပြီးအတူနေရင် ဘယ်သူ့မှာ အဲလိုရောဂါရှိနေနေ အရောင်ပြောင်းမယ်လို့ သီအိုရီအရဆိုပါတယ်။
လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါရှိနေရင် အဲဒီလူရဲ့ကိုယ်ကနေ အင်တီဘော်ဒီထွက်မယ်။ ကွန်ဒွမ်ကနေ အဲဒါကိုသိမယ်။ အရောင်ပြောင်းလာမယ်။ ကွန်ဒွမ်အသစ်အမျိုးအစားမှာ အလွှာပိုတခုပါတယ်။ အဲတာကနေ ကလာမိုင်ဒီးယား၊ ဆစ်ဖလစ်၊ လိင်လမ်းရေယုံနဲ့ ကြွက်နို့တွေကို စမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
WHO စာရင်းဇယားတွေအရ နေ့စဉ် လူပေါင်း ၁ သန်းဟာ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေ ကူးစက်ခံနေကြရတယ်။ ကလာမိုင်ဒီးယားက အဖြစ်အများဆုံး။ တီထွင်သူကျောင်းသားတွေ TeenTech Awards ဆု ပေါင် ၁ဝဝဝ ရသွားကြတယ်။
ကလာမိုင်ဒီးယားဆို အစိမ်းရောင်၊ လိင်လမ်းရေယုံ အဝါရောင်၊ လိင်လမ်းကြွက်နို့ ခရမ်းရောင်နဲ့ ဆစ်ဖလစ်ဆို အပြာရောင် ဖြစ်လာပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် နောက်ဆုံး ၃ လမှာ အအိပ်ပျက်တာများကြတယ်။ နုသေးရင် ကိုယ်ရောစိတ်ရော အကြောင်းခံတွေကနေ အိပ်ရေးကို ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ ကြွက်တက်တာ၊ ဆီးထသွားချင်တာ၊ အလွန်ဆော့တဲ့ကလေး၊ ကိုယ်ဝန်အရွယ်အစား ကြီးလာလို့ ဘယ်ညာလှည့်တိုင်းနိုးလာတာ၊ ခါးနာတာ၊ အိပ်မက်၊ မွေးဖွါးရမှာကို ကြိုပြီးကြောင့်ကျစိတ်ဝင်တာတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။
ကြွက်တက်တာသက်သာအောင် ခြေပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလို လှုတ်ရှားမှုမျိုး အမြဲလုပ်ပါ။ Calcium ဆေးသောက်ပေးပါ။ အိပ်ရင် တဖက်စောင်း၊ ဒူးကွေးအိပ်ပါ။ ခါးနာသက်သာအောင် ခေါင်းအုံးပို လိုတဲ့နေရာမှာုံးပါ။ ဆီးထမသွာရအောင် အိပ်ခါနီး ရေ-အရည် (ကော်ဖီ၊ လဖက်ရည်) လျှော့သောက်ပါ။ နေ့ခင်းမှာ ပိုသောက်ဘို့ မမေ့ပါနဲ့။ Two-ply sheet with two glossy sides စပါယ်ရှယ်အိပ်ယာခင်းသုံးပါ။ မအိပ်ခင် တီဗွီကြည့်တာ၊ စာဖတ်တာတွေထဲ စိတ်ထိခိုက်၊ အနှောင့် အယှက်ပြုမှာတွေ ရှောင်ပါ။ စိတ်ငြိမ်နည်း၊ ပုတီးစိတ်၊ တရားထိုင်၊ ချည်ထိုး၊ ရေနွေးချိုး၊ သာယာညင်သာတဲ့ တေးဂီတ။
ကိုယ်ဝန်အတွက် ပိုစိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့ (ဝိုင်-ဖိုင် ရောက်ဒါ) သစ် တရုပ်ပြည်မှာ အငြင်းပွါးနေ
Qihoo 360 ကနေ ထုတ်လိုက်တဲ့ (ဝိုင်-ဖိုင် ရောက်ဒါ) သစ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် ပိုပြီးစိတ်ချရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေဆီကို ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်တာ ၇ဝ% သက်သာတယ်လိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် Xiaomi ကနေပြန်ငြင်းတာက Qihoo ဈေးကွက်ကိုဆွဲဆောင်ဘို့အဲလိုပြောတာသာဖြစ်တယ် Wi-fi ဟာလည်း စိတ်ချရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုငြင်းခုန်မှုကို Weibo ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလုပ်နေကြတာပါ။ သူတို့က အကြီးစားပြိုင်ဖက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi ကနေလည်း အသစ်တခုထုတ်ထားသေးတယ်။ အဲဒီ ရောက်ဒါဟာ six terabytes storage ရှိတယ်၊ high-speed မြန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စိတ်ချရမှုကိုထည့်ပြောထားတာမရှိပါ။
Low-level non-ionising kind အလွန်နည်းပါးနိမ့်ကျတဲ့ အိုင်ယွန်နိုက်ဖြစ်စဉ်ရှိတာမှန်ပေမယ့် Wi-Fi ကနေ လူတွေအပေါ် သက်ရောက်တဲ့ Electromagnetic signals အီလက်ထရောနစ် အချက်ပြတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အမြဲစောင့်ကြည့် နေပါတယ်။ ဒီအဆင့်က လူကိုအန္တရာယ်မပေးနိုင်ပါ။
အမေရိကမှာအခြေစိုက်တဲ့ BabySafe Wireless Project ကနေ Wireless radiation ဝိုင်ယာလက်စ်ရောင်ခြည်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ မွေးစကလေးတွေတွေကို ဒုက္ခမပေးနိုင်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် World Health Organization ကတော့ အထောက်အထားမခိုင်လုံသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်စေတာ၊ ကလေးပုံမှန်မဟုတ်တာနဲ့ ကလေးအလေးချိန်နည်းတာတွေဖြစ်စေတဲ့ အထောက်အထားတော့ မတွေ့သေးပါ။
အင်းဆက်ဆေး လင်ဒိန်းကနေ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်
ကမာ့္ဘကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုးသတ်ဆေးကို အီးယူနိုင်ငံဗတွနဲ့ ယူအက်စ်မှာ မသုံးဘို့ တားမြစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Non-Hodgkin's lymphoma ခေါ်တဲ့ အကျိတ်ကင်ဆာကို ဖြစ်စေတာ အထောက်အထားခိုင်လုံလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Lindane ကိုမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ ဆက်သုံးနေကြပါတယ်။ ဒီပိုးသတ်ဆေးကို သန်းပျောက်ဆေးနဲ့ ဝဲပျောက်ဆေးတွေထဲမှာလည်း ထည့်ထားတယ်။
၁၉၇ဝ ကျော်ကတည်းက ပိတ်ပင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ DDT ပိုးသတ်ဆေးကနေလည်း လူတွေမှာကင်ဆာဖြစ်စရာအကြောင်း ရှိတယ်လို့လည်း သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမေယ့် တချို့အစားအသောက်တွေမှာ စစ်ဆေးတော့ တွေ့နေသေးတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှိနေသးလို့ဖြစ်ပါမယ်။
(အဘ) လို့ဆက်ခေါ်နေသူတွေဆီကို မက်ဆေ့ကနေ (အဘ) စာကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တော့ လေးစားလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အရွယ်အိုမင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ခေါ်တဲ့သူတိုင်းကို (ဘလော့ခ်) လုပ်ပါတော့မယ်။ (အဒ်) လုပ်စရာတွေများလာလို့လည်း ပါတယ်။
• တကယ်အမျိုးမတော်ဘဲ အကို၊ ဦးလေး၊ အဘလို့ အခေါ်ခံရတာနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကို သားလို့၊ သမီးလို့ရေးတာတွေက ကျွန်တော့်အတွက် အခက်အခဲရှိပါတယ်။
• မေးတာတွေဖြေတဲ့အခါ နားလည်းရခက်တယ်။ သမီးဆိုသူက သူ့အကြောင်းလား၊ သူ့သမီးအကြောင်းလား၊ သမီးရဲ့သမီး ဆိုတော့ မြေးလားမသိနိုင်ပါ။
• ကျမဆိုတာကို မသုံးတော့တာကို စိတ်မကောင်းပါ။
• ဆရာဝန်နဲ့လူနာကြားမှာ တွယ်ကပ်မှုကင်းရတယ်။ အမျိုးစပ်မှုရှင်းရတယ်။
• အဘဆိုတာ စစ်အစိုးရထဲက လူကြီးတွေကို ခေါ်ကြတယ်။ တပ်ရင်းမှူးကို အဘလို့ ခေါ်ကြသတဲ့။
• နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်၊ ထောင်ချခဲ့သူ သူကိုယ်တိုင်က ထောင်ကလွတ်လာတော့ သူ့ကိုယ်သူ အဘတဲ့။ အဲသည်ကတည်းက ကျွန်တော့မှာ အဘဆိုတာကို ခါးသီးလာတော့တာပဲ။
• ဆရာတလုံးတည်းသာ အမှန်ဆုံးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာဆိုတာလည်း နားယဉ်ပြီးသားမြန်မာစကား ဖြစ်လာနေပါပြီ။
• ကျွန်တော့်အသက်ကို အမှန်အတိုင်းရေးထာတာမို့ ငယ်ချင်လို့မဟုတ်မှန်းလဲ သိကြမှာပါ။
• အဘကြိုက်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိလို့ ကျွန်တော်က (ဘလော့ခ်) လိုက်လည်း အဘကိုသာ နုတ်ကျိုးနေသူများအတွက် ပူစရာမရှိပါ။
၁။ ဆရာ ဒီဆေးနဲ့ပက်သက်ပြီး ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေး သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ သမီးအဲဆေးကို သောက်နေတာပါ။ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့စကားစပ်မိပြီး အဆီကျချင်တယ်ပြောတော့ ဒီဆေးကို လမ်းညွှန်တာနဲ့ သောက်ဖြစ်တာပါဆရာ။ ဆိုးကျိုးဆိုတာကိုမေ့ထားပြီး သောက်မိနေတာပါ။ အခုအသေအချာလေး သတိထားကြည့်လိုက်တော့ ဆရာဝန်က သေချာ လမ်းညွှန်ထားတာမဟုတ်တော့ စိုးရိမ်စိတ်လဲဖြစ်လာမိပါတယ်ဆရာ။
၂။ Xenical ဆိုတာဘယ်လိုဆေးမျိုးပါလဲဆရာ။ အဆီကျတယ်ဆိုလို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုမရှိပဲ တနေ့တလုံးသောက်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆရာ။
• Xenical ဇန်နီကယ်ဆိုတာ Orlistat ဆေးဖြစ်တယ်။ Alli နာမည်တွေနဲ့လည်း ရောင်းတယ်။ Tetrahydrolipstatin ဆေးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဘို့ပေးပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့အဆီကို ကိုယ်ကနေ စုပ်ယူတာကို ပိတ်ပင်ပေးမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းအောင် ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အစားအသောက် ရွေးတာနဲ့ တွဲဖက်ရမယ်။ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ (ကိုလက်စထော) များသူတွေက အဲတာမျိုးလိုအပ်ကြတယ်။
• အွန်လိုင်းကနေ ဒီဆေးဝယ်တာစိတ်မချရပါ။ ဆေးထဲမှာ Sibutramine (Meridia) ဆိုတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆေးပါတယ်။ စိတ်ချရမှုကို အာမခံချက်မရှိသေးဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူတိုင်း မသောက်ရပါ။ သည်းခြေ မကောင်းသူ၊ နာတာရှည် အစာစုပ်မယူနိုင်သူတွေလဲ မသောက်သင့်ပါ။ လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းနည်းနေသူ၊ ဆီးချိုရှိနေသူ၊ သည်းခြေကျော်ရှိနေသူ၊ ကျောက်ကပ် မကောင်းသူ၊ အသဲမကောင်းသူတွေလဲ သတိကြီးကြီးနဲ့သာ သောက်ရမယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်လဲ မသောက်သင့်ပါ။
• Xenical 120-mg capsule တနေ့ (၃) ကြိမ်။ အဆီပါအစားအစာစားပြီးနောက် (၁) နာရီအတွင်းသောက်ပါ။
• Vitamin ဗီတာမင်အားဆေးကို ဒီဆေးမသောက်ခင် ၂-၃ နာရီ ကြိုတင်-နောက်ကျ သောက်ပါ။
• Cyclosporine therapy ဆေးသောက်နေရသူဆိုရင် Xenical နောက် (၃) နာရီခြာသောက်ပါ။
• Levothyroxine therapy ဆေးသောက်နေရသူဆိုရင် Xenical နောက် (၄) နာရီခြာသောက်ပါ။
• စားလိုက်တဲ့ အစာထဲမှာ အဆီပါနေတာကို ကိုယ်ကနေ စုပ်ယူတာ မလုပ်အောင် တားပေးမယ်။ (ကယ်လိုရီ) မများစေဘူး။ ကိုယ်အလေးချိန်ချတာမှာ ဒီဆေးက ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသင့်အတင့်သာ ရမယ်။
• ဆေးနဲ့အတူ အဆီလျှော့စားတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလဲ တွဲရမယ်။ ဆရာဝန်ကနေညွှန်သလို အစားအစာ စားနည်းနဲ့ပါတွဲမှ ထိရောက်တယ်။
• အဲလိုလုပ်နိုင်သူတွေ တနှစ်နေတဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန် ၂-၃ ကေဂျီ လျှော့စေတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရတယ်။ သွေးဖိအား (သွေးတိုး) ကိုလဲ အသင့်အတင့် ချပေးသေးတယ်။ ဆီးချိုဖြစ်လာမှာကိုလဲ တာဆီးတဲ့သဘော ရှိတယ်။
• လေ့လာမှုတခုအရ ဆေးသောက်သူထဲက ၃၅့၅-၅၄့၈% မှာ ကိုယ်ခန္ဓာထုထည် ၅% ကျတယ်။ ၁၆့၎-၂၄့၈% မှာ ကိုယ်ခန္ဓာထုထည် ၁ဝ% ကျတယ်။ ဆေးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ ၃၅% မှာ ကိုယ်အလေးချိန်ပြန်တက်တယ်။
• Malabsorption အစာမချက်နိုင်တဲ့ရောဂါ၊ ဆေးမတည့်ခြင်း၊ သည်းခြေအိတ် အလုပ်နည်းနေသူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်တွေမှာ ဒီဆေးမပေးရပါ။
• သည်းခြေလမ်းပိတ်နေသူ၊ အသည်းမကောင်းသူနဲ့ သရက်ရွက်မကောင်းသူတွေကို သတိထားပေးရတယ်။
• ဆိုးကျိုးတွေက ဆေးသောက်စမှာ ပိုသိသာတယ်။ နောက်ဆိုရင် သက်သာလာနိုင်တယ်။ Steatorrhea ဝမ်းသွားတဲ့အထဲ အဆီတွေပါနေမယ်။ သက်သာအောင် အဆီပါတာ ရှောင်ရမယ်။ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သလား ဆန်းစစ်နေတယ်။ အတွင်းခံ အဝတ်အစားမှာ အဆီစက်ထင်နိုင်တယ်။ ဝမ်းသွားတဲ့အကြိမ် များနိုင်တယ်။ ပျို့-အန်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆီးအရောင်ရင့်နိုင်တယ်။ အစားပျက်နိုင်တယ်။
• ဆီးချိုဆေးတွေ၊ Cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune) ဆေး၊ Digoxin (digitalis, Lanoxin, Lanoxicaps) ဆေး၊ Levothyroxine (Synthroid, Levoxyl, Levothroid) ဆေး၊ Warfarin (Coumadin) ဆေးတွေနဲ့ တွဲသောက်နေရရင် ဆရာဝန်ပြောပါ။
• ဗီတာမင်တွေထဲမှာ (အေ)၊ (ဒီ)၊ (အီး) နဲ့ (ကေ) တွေဟာ အဆီမှာ ပျော်ဝင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် Vitamin A, D, E, K နဲ့ beta-carotene ပါတဲ့အားဆေး တနေ့တလုံး ညစဉ်သောက်နေသင့်တယ်။
အရွယ်ရဲ့သဘော စောကြောမိတယ်။ ဇရာအကြောင်းမဟုတ်၊ ဆေးပညာစာလည်းမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးပါ။ အားလုံးအကုန် ခြုံပြီးပြောချင်တာလည်း မဟုတ်သေးပါ။ ပညာတတ်လို့ သတ်မှတ်မလား၊ ပညာရှင်ပဲ ခေါ်တွင်သလား၊ ကျောင်းသက် မနည်းလှသူတွေ၊ လူသိသူသိလည်း များတဲ့သူရဲ့တွေ အုပ်စုတခုတည်းကို ကွက်ကွက်ကလေး တွေးကြည့်မလို့ပါ။
စာအုပ်တွေထဲမှာ မပါ။ သုတေသနလည်း မဟုတ်ပါ။ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ခပ်တိုတို အတွေ့အကြုံ မပြည့်မစုံကနေ ကောက်ချက် ကြမ်းကြမ်းဆွဲကြည့်ချင်တာပါ။
လူ့အသက်ကိုပိုင်းခြားပြီး ဘယ်အရွယ်မှာ ဘာလုပ်ဘို့အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိတယ်။ ဆေးပညာမှာ ရှိသလို ဘာသာရေးမှာလည်းရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်အရွယ်တွေက အကောင်းဆုံးပါလည်း။ အမျိုးမျိုးပြောကြမှာပါ။ ပြောတာတွေက မှားမှာတော့မဟုတ်ပါ။ တူချင်မှတော့ တူမယ်။ ၄ဝ-၅ဝ ကိုယူချင်တယ်။
ကောလိပ်တို့ တက္ကသိုလ်တို့လည်း ပြီးမြောက်ခဲ့ကြပြီ။ ဗဟုသုတလည်းစုံလှပြီ။ အတွေ့အကြုံတွေလည်း မနည်းမနော။ အတွေးအမြင်တွေလည်းစူးရှနေကြပြီ။ ဟိုအသင်းသည်အဖွဲ့မှာလည်း တာဝန်ယူဘူးတယ်။ နောက်တဆင့်တက်ကြရမယ်။ တက်ကြပါတယ်။
မီရာရထားလိုက်ကြသူက များသလားလို့။ အခုဂျင်နရေးရှင်းမှ မဟုတ်ပါ။ ဒိအရင်မျိုးဆက်တွေလည်း အဲလိုလုပ်ကြသူက အတော်များပါတယ်။ အားလုံးတော့မဟုတ်ပါ။ ဘူတာမှာ ကျန်နေခဲ့သူတွေလည်း မနည်းပါ။ ရထားကြပ်နေလို့လည်း မဟုတ်၊ လက်မှတ်ဘိုးမတတ်နိုင်သူတွေလည်း မဟုတ်၊ ခရီးမဆက်ချင်သူတွေလည်း မဟုတ်ကြပါ။
စီးပွါးရေးမှာ အမြတ်အစွန်းက ပဓါနကျတယ်။ အဲတာတခုတည်းလို့ပြောရင်လည်းရတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာကော။ အသက် ၄ဝ-၅ဝ မှာ ကိုယ့်ရှေ့ရောက်လာတဲ့ရထားကို တက်စီးချင်ကြတာ ပုံမှန်သာဖြစ်တယ်။ ထိုင်ခုံလည်းရသွားကြတယ်။
ဘူတာမှာကျန်ရစ်သူတွေကတော့ ရထားမကြိုက်လို့ လိုက်မသွားကြဘူး။ ငိုက်လည်းမနေကြပါ။ ကြီးသူတွေသာမက၊ ငယ်သူတွေလည်း ပါမသွားကြဘူး။
ဆရာရှင့် ကျမအိမ်ထောင်ကျတာ ၁ နှစ် ၈ လရှိပါပြီဆရာ။ ကျမအသက်က ၃၆ နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ၃ လခွဲမှာ ကလေး ပျက်ကျသွားတယ်ဆရာ။ သူခွင့်တစ်လယူပြီး ပြန်လာပါတယ်ဆရာ။ ကျမက တားဆေးလဲ ထိုးမထားတော့ ကလေး ပြန်ရမယ်ပဲထင်နေတာဆရာ။ ဒါပေမယ့် ကျမကလေးမရဘူးဆရာ။ ကျမသတိထားမိတာက ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါတိုင်း အရည်တွေ ပြန်ထွက်တယ်ဆရာ။ အချိန်တိုင်းပဲဆရာ။ အသက်ကြီးပြီး ကလေးမရတော့မှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်ဆရာ။
လိင်ဆက်ဆံအပြီးမှာ မိန်းမအင်္ဂါအဝကနေ အရည်အနည်းနဲ့အများထွက်ပါတယ်။ ထွက်တာတွေက ဘာတွေလဲ။ ယောက်ျားသုက်ရည်၊ ဗဂျိုင်းနားအရည် နဲ့ တကယ်လို့ မိန်းမကလဲ ပြီးဆုံးမှု ဖြစ်တာဆိုရင် သူကနေ သပ်သပ် ထပ်ထွက်မဲ့အရည် (၃) မျိုးပါနိုင်တယ်။ တချို့ အမျိုးသမီးတွေက ပြီးဆုံးရင် ယောက်ျားတွေလို အရည်ပန်းထွက်တာမျိုး ရှိတယ်။ ရှားပါတယ်။ သိပ်ရှားတာလဲ ရှိသေးပြန်တယ်။ တချို့မိန်းမတွေ ဆီး (သေး) ပန်းထွက်တယ်။ အခြေအနေ တကြိမ်နဲ့တကြိမ်မတူပါ။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်ကြာမြင့်နေရင် စိုစွပ်မှုပိုများမယ်။ လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုများရင်လဲ အရည်ထွက်ထာ နှစ်ယောက်လုံးဆီကနေ များမယ်။ တယောက်ကသာများတာလဲရှိမယ်။ Orgasm ဖြစ်ကြတာမှာလဲ အပြင်း-အပျော့ တခါနဲ့တခါမတူကြပါ။
ဒီလိုဖြစ်တာ ကလေးမရတာကို ဖြစ်စေမယ်လို့တော့ ပြောမရပါ။ စိုးရိမ်တာ မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပါတယ်။ ယောက်ျားကနေ လိင်မှုကိစ္စပြီးဆုံးလို့ ကျားအင်္ဂါထိပ်ဝကနေ အရှိန်နဲ့ထွက်လာတဲ့ သုက်ရေထဲမှာ သုက်ပိုးက ၅% သာ ပါတယ်။ သုက်ရည်တချို့က ဗဂျိုင်းနားထဲဝင်တယ်။ ဆက်ပြီး သားအိမ်အဝကနေ သားအိမ်ထဲကိုဝင်မယ်။ သုက်ပိုးက အလွန်မတန်လှုတ်ရှားတယ်။ သားအိမ်ထဲရောက်ရင်လဲ သားအိမ်အထက် ဘယ်-ညာကနေ ထွက်နေတဲ့ ပြွန်တွေဆီအထိ ဆက်အုံးမယ်။ ပြွန်တဖက်ထဲမှာသာ မ-မျိုးဥက ရှိနေမယ်။ သုက်တခါလွှတ်ရင် 200-600 million ပါတယ်။ သုက်ရည် လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၄ ပုံ ၁ ပုံထဲမှာ 100 million ပါနိုင်တာမို့ သန်းဂဏန်းရှိ သုက်ပိုးတွေ အထဲဝင်မှာ သေခြာတယ်။ မမျိုးဥဆီအထိ အောင်အောင်မြင်မြင်ရောက်မဲ့ သုက်အကောင်ရေ ၁ဝဝဝ လောက်ရှိပါတယ်။ သန္ဓေရဘို့ကတော့ ၁ ကောင်တည်းသာလိုတယ်။
ယောက်ျားက အရင်တကြိမ်ပြီးတုံးက မိန်းမအင်္ဂါထဲမှာသာ သုက်လွှတ်ထားခဲ့ပြီး ကြားထဲမှာ အမျိုးသမီးက ရေဆေးတာ မလုပ်လဲ နောက်တကြိမ်ထပ် ဆက်ဆံကြရင်လဲများနေမှာဘဲ။ စိုစွပ်ချင်လို့ အရည်တုသုံးရင်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အမျိုးသမီးမှာ အဖြူဆင်းတဲ့ရောဂါရှိနေရင် စိုစွပ်မှုများနိုင်တယ်။ ကျားအင်္ဂါကို အတွင်းရောက်ရင် ထွက်ကျတာ သက်သာမယ်။
သုက်ရည်တွေ အထဲဝင်စေဘို့ ကျားအင်္ဂါ အတို-အရှည်က အရေးမပါသလို၊ သုက်လွှတ်ချိန်မှာ နက်သထက် နက်အောင် ထိုးထည့်ထားပေးဘို့လဲ မလိုလှပါ။ နည်းတခုက ဆက်ဆံအပြီး အမျိုးသမီးရဲ့တင်ပါးအောက်ကနေ အခုအခံတခု ၁၅-၂ဝ မိနစ်လောက် ထားပေးပါတဲ့။ တချို့ကလဲ သုက်လွှတ်အပြီး၊ အမျိုးသမီးက ခြေနှစ်ဖက်ကို အထက်ထောင်ထား၊ စက်ဘီးစီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလို လုပ်ဘို့ အကြံပေးတယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သားအိမ်အနေအထား ၂ မျိုးရှိတယ်။ ဆေးစာမှာ အတိုကောက် RV နဲ့ AV လို့ ခေါ်တယ်။ သားအိမ်က သူ့ရှေ့က ဆီးအိမ်ဆီ ကောက်နေရင် AV သူ့နောက် အစာဟောင်းလမ်းဆီ ကောက်နေရင် RV လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ နှစ်မျိုးလုံး (နောမယ်လ်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရနိုင်တာအပါအဝင် ဘာကိုမှပြဿနာမပေးပါ။ သုက်ရည် အပြင်ထွက်ကျ စေဘို့ကိုလဲ သူ့အနေအထားက ဒုက္ခမပေးပါ။
Artificial insemination techniques ဆိုတာ ပုံမှန်နည်းတွေနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးသူတွေအတွက် အတုလုပ်ပြီး သုက်ရည်ကို ဆရာဝန်ကနေ သားအိမ်ထဲ ထည့်ပေးနည်းဖြစ်တယ်။ ဒီသဘောအတိုင်း ကိုယ့်ဖါသာလုပ်နည်းဟာလဲ အကြံကောင်းတခု ဖြစ်တယ်။ တခါသုံး-ဆေးထိုပြွန် တခုကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Orgasm ရပြီးလို့ ထွက်လာတဲ့ သုက်ရည်ဟာ ထွက်စမှာ ပျစ်ချွဲနေတယ်။ သုက်ရည်ကို သန့်တဲ့ခွက်ငယ်တခုမှာ ထည့်ထားရမယ်။ ၁၅-၂၅ မိနစ်ဆိုရင် အရေပျော်လာမယ်။ ဒါကို ဆေးထိုးပြွန်နဲ့ စုပ်ယူပြီး အပ်မပါဘဲ ဗဂျိုင်းနားထဲ သွင်းထည့်ပေးနိုင်တယ်။ အထဲကို ၃-၄ လက္မ ဝင်ရင် ရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရမဲ့နေ့ဟာ အမျိုးသမီးရဲ့ရာသီလ အလယ်ရက် ဖြစ်သင့်တယ်။ ရာသီ စဆင်းခဲ့တဲ့နေကနေ ရေတွက်ရင် ၈ ရက် ကနေ ၁၉ ရက်မြောက်နေ့အတွင်းဟာ ကိုယ်ဝန်အရနိုင်ဆုံးရက်တွေဖြစ်လို့ ဆက်ဆံသင့်တယ်။ ဒီနည်းကိုလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တောနယ်တခုမှာ ကလေးမရနိုင်သေးတဲ့ စုံတွဲတွေအတွက် ကြိုးစားပေးခဲ့ဘူးတယ်။ MBBS တွေ သင်ရတဲ့ဆေးစာအုပ်မှာမပါ၊ (အင်တာနက်) လဲ မပေါ်သေးလို့၊ တီထွင်ကြံဆ နည်းလမ်းရလုပ်ပါတယ်။ သုက်ရည် ပျော်ချိန်အထိ အချိန်မစောင့်ပဲ သုက်ရည်ကို ဆေးထိုးတဲ့မိုးရေနဲ့ ရောလိုက်တယ်။ မဟုတ်ရင် စုပ်ယူဘို့သိပ်ခက်တယ်။ ပိုးသန့်ထားတဲ့ ရာဘာဆီးခြူပိုက် အနေတော်ကို ဆေးထိုးပိုက်ရဲ့ထိပ်မှာတပ်၊ သားအိမ်အဝအထဲထိ ထိုးသွင်းပြီး၊ သုက်ရည်တွေကို သားအ်ိမ်ထဲအထိ သွင်းပေးနည်းလုပ်တယ်။ လူနာကို ခြေရင်းမြှင့်ပေးထားတဲ့ စမ်းသပ်ကုတင်မှာ ၁၅ မိနစ်လောက် ပက်လက်လှဲနေစေပါတယ်။ အားလုံးတော့မရပေမယ့် ကံကောင်းတဲ့စုံတွဲတတွဲက သားယောက်ျားလေး တယောက်ရလိုက်တယ်။
၁။ Yee Mon ဆရာရှင့် သမီးက ကိုယ်ဝန် ၆ လနဲ့ပါ။ ၁ ပတ်ကို ၁ ခါလောက် ချော့ကလက်လေး ၂ ခဲ (2 squares) လောက် စားမိပါတယ်။ လက်ဖက်လဲ ၂ ပါတ် ၃ ခါလောက် နည်းနည်းစားမိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကဖင်းဓါတ် စားမိရင် ကလေးငယ်ကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတော့ သမီးစားမိတာတွေက အန္တရာယ်များဖြစ်စေပါလား ရှင်းပြပေးပါ ဆရာရှင့်။ သမီးက ကော်ဖီ/လက်ဖက်ရည်တော့ လုံးဝမသောက်ပါရှင့်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
၂။ ကျွန်မအသက် ၃ဝ ပါဆရာ။ ဒုတိယကိုယ်ဝန် ၂ လ ခန့်ရှိပါပြီဆရာ။ ကျွန်မသိချင်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ သောက်သင့် မသောက်သင့် သိချင်ပါတယ်ရှင့်။
၃။ ကျမ Nescafé3in 1 regular instant coffee ကို မနက်တိုင်းသောက်ပါတယ်။ တနေ့မှာ ကေဖင်း ဘယ်လောက် သောက်သင့်ပါသလဲ။ ကျမကိုယ်ဝန် ၁၈ ပါတ်ရှိပါပြီရှင့်။
ကေဖင်းသောက်ရင် ကလေးမရစေဘူးဆိုတာ မမှန်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးမှာ ကေဖင်း ဘယ်လောက်သာ သောက်သင့်သလဲဆိုတာလဲ အငြင်းပွါးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Caffeine 200 mg per day ထက်မများစေနဲ့လို့ အဆိုတခုရှိတယ်။ တနေ့မှာ ကော်ဖီ ၁၂ အောင်စနဲ့ညီတယ်။ 200 mg ထက်များရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ဘို့ အလားအလာ ၂ ဆပိုတယ်။ အသေမွေးလဲ ၂ ဆ ပိုတယ်။ အမှန်က ကိုယ်ဝန် ရင့်လာလေလေ ကိုယ်ခန္ဓာအလုပ်တွေကနှေးလာလေမို့ ဖြစ်တာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကေဖင်းဟာ ကိုယ်ထဲမှာကြာကြာနေမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ ကေဖင်းသောက်ရင် အချင်းကနေတဆင့် ကလေးဆီကို ရောက်တယ်။ ကလေးမွေးပြီး နို့တိုက်ချိန်မှာလဲ ကေဖင်းနည်းတာကောင်းတယ်။ ကော်ဖီနဲ့ လဖက်ရည်ထဲမှာ ဖီနောလ် ပါတယ်။ သူကနေ သံဓါတ် စုပ်ယူတာကိုနှေးစေတယ်။ ကလေးအိပ်ချိန်နည်းစေမယ်။ သတိရှိတာများနေမယ်။ တချို့က Caffeine 150 mg – 300 mgaday လို့သတ်မှတ်တယ်။
•7Eleven Big Gulp Coca-Cola (32 oz) = 92 mg - 124mg
• Baker’s chocolate (1 oz) = 26 mg
• Ben & Jerry’s Coffee Buzz Ice Cream (8 oz) = 72 mg
• Black tea (6 oz) = 45 mg
• Dr. Pepper (12 oz) = 37 mg
• Excedrin (per capsule) = 65mg
• Green tea (6 oz) = 40 mg
• Starbucks Grande Coffee (16 oz) = 400 mg
• Starbucks House Blend Coffee (16 oz) = 259mg
• Cocoa Beans 39%
• Sugar 48%
• Cocoa Butter 13%
• Lecithin < 1%
• Vanilla < 1%
• Cocoa Beans 16%
• Whole Milk Powder 16%
• Sugar 38%
• Cocoa Butter 30%
• Cocoa Butter 27%
• Milk Powder 25%
Caffeine ကေဖင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/caffeine.html
Caffeine and Pregnancy ကေဖင်းနဲ့ကိုယ်ဝန် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/caffeine-and-pregnancy.html
Caffeine in Tea (ကေဖင်း) နဲ့ လက်ဖက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/caffeine-in-tea.html